Cunaqabataynta Siyaasadeed ee Telesom Lagu Hayo.
(Hadhwanaagnews) Wednesday, March 14, 2018 10:26:39
waar shakiga iska daaya .Hadii la yidhi sixir bararka aan dejino ma Telesom baa loo jeedaa?mida kale ,ma iyadoo qudhaa
Dhaqane:Xasadka ilaahay ma taageero,dowladan iyo tii ka horaysayba waxay lug iyo farasba isugu taageen sidii ay shirkada telesom albaabada ugu laabi lahaayeen iyagoo doonaya inay dad gaar soo saaraan.Waar risiqa ilaahay baa bixiya.
Dhaashane;waar shakiga iska daaya .Hadii la yidhi sixir bararka aan dejino ma Telesom baa loo jeedaa?mida kale ,ma iyadoo qudhaa sowta kuwa kaleba sharciga lagu soo wada saaray maaha.
kale sowta laydhkii kootada loogu xidhay.Sowta kaybulkii kootada loogu xidhay waar waxaa iska daayoo waxan ku waydiiyey ,Mashruucii xunbo weyne xageebuu ku danbeeyey?
Dhaashane:Mashruuci waaka socda dee .Xagee buu ku dambeeyey ma hadalbaa?
Dhaqane;Hadaa ma wasiir kooraa been sheegaya sowkii yidhi,waar meesha ku kala yaaca biyona ma jiraane.Walee kaasi waa fariid.
Dhaashane;Inaadeer horta waxan ku waydiiyey,maanta an si qaawan u wada hadalee reerkiina miyaan dowlada qofna kaga jirin?
Dhaqane;Adeer anaga waxa nagu filan sawirka .Anaga ninkii Muse biixi isla sawiraa wasiirna uma baahna.
Dhaashane;Waar heedhe ninkii Ciro muxuu qoonsaday waakan madaxweynihii ka hadhee?Mise wixii la idinku xamanayey baa dhab ah oo Soomali weyn buu la haystaa ileyn waakan Gud.Faysal raacee?
Dhaqane;Ciro siduu madaxweyne ku helayaa haduu dalka xaraashkiisa ka qayb galo?Iga wala kan Bile Raflaa idiinka lexo jeclo badnaa.
Dhaashane;Anigu waxan la yaabay kuwaa baarlamaan isku sheega soomalia ee yidhi;Berbera DP world ma iman karto.Hada bakaaraha ma xukumaan.
Dhaqane;Ma idinkaa dhaama ,intaa tidhaahdeen waxaanu soomalia uga go`nay cadaalad daro ayaa cadaalad darada aabaheed noqoteene.
Dhaashane;Waar intaad telsom iyo arimaha gudaheena ka hadlaysaaba la qaatee bal ina soo celi.Xageed nala aaday?
Dhaqane;Telesom sowtaan idhi:
Telesom tagtay oo talaabsatay
Rag kastoo u tashada ka tamar badan
Taakuladay dadkeeda siinaysiyo
Taageero alay ku socotaa
Tacliin rag leh baa ku talax tegayoo
Tiriig weeye aan la damin karin